भगवान विष्णु किन सर्पको ओछ्यानमा सुत्छन् ? - Deshko News Deshko News भगवान विष्णु किन सर्पको ओछ्यानमा सुत्छन् ? - Deshko News
भगवान विष्णुले केहि अवतार लिएका छन् । उनलाई पापको सागरबाट दुनियाँलाई मुक्त गर्ने प्रतिकको रुपमा मानिन्छ । भगवान विष्णुको वाहन त गरुड हो । तर, शेषनाग पनि उनको प्रत्येक अवतारमा जोडिएको छ ।हिन्दु धर्मले यो विशाल सर्पलाई शेषनाग भनेको छ । यस चित्रणको खास महत्व छ ।